Kucocwe zonke iinkcukacha zeQualcomm Snapdragon 735 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuvuza kweSpapdragon 735 Iinkcukacha: Kuya kuzisa inkxaso kwiinethiwekhi ze5G kuMgangatho ophakathi
Uthotho lwe-Snapdragon 700 ngumgca we-chip we-Qualcomm ophezulu kwinqanaba eliphakathi. Oku kubandakanya ii-SoCs Snapdragon 710 kunye Snapdragon 712 10 nm, kunye ne Iiprosesa ze-730nm Snapdragon 730 kunye ne-Snapdragon 8G.
Ngeli xesha, sithetha ngeqonga elizayo leselula, njengoko ukuvuza okutsha kutyhila ukuba iQualcomm iphuhlisa i-chipset ye-7nm eya kuthi yaziwe njengentengiso Snapdragon 735.
Ngokuvuza, i-Snapdragon 735 iya kuba yi-chipset ye-7nm njenge Snapdragon 855, Oko kuthetha ukuba ukusebenza kwamandla kuya kuba ngaphezulu kune-730nm Snapdragon 8 duo.
Iimpawu zeQualcomm Snapdragon 735 ezivuzayo
I-SDM735 ngokwayo iya kuba yiprosesa ye-octa-core kunye neqela le-CPU eli-1 + 1 + 6. Iya kuba nesiseko esingachazwanga esivela kuthotho lweKryo 400 evalwe kwi-2.9 GHz kunye nolunye uthotho lweKryo 400 oluvaliwe kwi-2.4 GHz kunye nochungechunge lweKryo 400 ezintandathu. iwotshi kwi-1.8 GHz.
Iqonga leselula liya kuba nefayile ye- I-Adreno 620 GPU ivalwe nge-750 MHz ngenkxaso yemiboniso ye-QHD (3360 X 1440) enombala obanzi we-gamut kunye ne-HDR10 / HDR10 +. I-SoC iya kuxhasa ukuya kuthi ga kwi-16GB ye-LPDDR4X RAM.
I-Qualcomm's Snapdragon 735 iya kuba nayo iSpectra 350 ISP, njenge-Snapdragon 730, exhasa ukuya kuthi ga kwi-32 MP @ 30fps ZSL. Ngokulandelayo, iphethe iNPU 220 yemisebenzi ye-AI ngesantya se-1 GHz.
I-Snapdragon 865 iza kuza nenkxaso ye-LPDDR5 RAM
Iprosesa ayizukuba yi-chipset ye-7nm kuphela njenge-Snapdragon 855, kodwa Iya kuba nemodem ye-5G eyakhelweyoOko kuthetha ukuba iifowuni eziphakathi kuluhlu lwe5G zisendleleni. Iya kuhambelana ne-UFS 2.1, eMMC 5.1 kunye ne-USB 3.1 Gen 1 yohlobo C lweenkumbulo.
Akukho lizwi lokuba i-chipset iza kubhengezwa niniKodwa inokukhutshwa kulo nyaka kwaye uqalise ukubonisa izixhobo ngo-2020.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukuvuza kweSpapdragon 735 Iinkcukacha: Kuya kuzisa inkxaso kwiinethiwekhi ze5G kuMgangatho ophakathi
Imifanekiso emitsha enikezelweyo yePixel 3a kunye nePixel 3a XL iyavela
INokia 9 Pureview ifumana uhlaziyo luka-Epreli ngenqaku lokhuseleko kunye nophuculo olwahlukeneyo